Xornimodoon Mise Xaasidnimo: Halkan Riix Si,aad u Buuxiso Arjigan Codsiga Wadajirka ah [Petition] – Rasaasa News
Sep 3, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilada
Xubnaha ONLF ee Jwxo-shiil daba jooga, ma aha kuwo daacad ka ah halganka ay wado ummada Somalida Ogadeeniya ee ay Jwxo ugu horeyso, waxaa indho, dhago iyo caqli u ah Jwxo-shiil, xitaa talo kuma biirsan karaan, waxaase lala yaabanyahay sidee ayuu u xushay dadkan.
Waxaan aad iyo aad ula yaabaa kolka aan akhriyo bogga Ogadennet.com ee uu wadaha ka yahay Ina Miraad Layli oo isagu qabaan u noqday Jwxo-shiil, una miidaan qariya halganka ay wado Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo]. Boggani waxaa uu qoraa waxyaabo aad is odhanayso ruuxani waa ruux sidee ah, waxaan hubaa in uu Buufis la il daran yahay Ina Miraad Layli, wuuuna ka dhacsan yahay marinka haboon ee halganka Somalida Ogadeeniya.
Waxaa ka mid ah wax yaabaha uu qoraalka ku caadaystay isaga oo leh; warbixintii ugu dambaysay ee dagaalada ka socda Ogadeeniya, goor walba waxaa uu ka sheekeeya wanaag ayna lahayn labada dambiile waa Jwxo-shiil iyo Ina Dhuubo, waxaa uu soo celceliyaa taswiirtii uu soo qaaday Jeffery Gentalman saddex sano ka hore, wuxuuna maalin walba soo bandhigaa dagaal dhacay oo aan la ogayn meel uu ka dhacay. Hadii uu dagaal dhaco inta uu dooniba ha la ekaadee waxaa dhab ah in lagu soo qori bogg walba oo internet ah kana soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya xitaa kuwa gumaysiga. Waxaase wax lala yaabo ah in Ina Miraad Layli isaga oo aan ahayn caruur, caqli xumana ayna haynin waxa ku kalifaya in uu been meherad la,aan ah maalin walba ku soo qoro boggan, waxaan hubaa in arintani ayna ka hayn wadaniyad balse ay ka tahay Buufis Jwxo-shiil.
Waxaan kuugu nasteexayn lahaa, in Jwxo-shiilka aad jeegada saaranayso uu yahay ninka burburiyey Jwxo, balana uu ku galay in uu soo gabogabeeyo magca Jwxo, waana midka ina dhigay maanta meesha aynu taaganahay. Hadii uu daacad kaa yahay waxa aad qoraysaa oo aad tahay in jecel wanaaga iyo wax qabsiga Somalida Ogadeeniya maxaad u samayn wayday ama aad boggaga u soo galin weyday wanaaga u soo hoyday ummada Somalida Ogadeeniya ee ku saabsan, Arjiga codsiga ah ee ay xukuumada Ingriisku u ogolaatay in ay soo buuxiyaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya [Ogaden petition to UK prime Minister], ma cidbaa gaar u leh arjigan waxay dan u tahay Somalida Ogadeeniya oo dhan iyo halgankeeda. Waxaana suurto gal hadii la helo dadka loo baahan yahay in ay dawlada Ingriisku Cambaarayso xukuumada Itobiya, hadii aad diiday in aad wanaagaas u soo galiso dadweynah Somalida Ogadeeniya, waa maxay wax kale ee aad doonaysaa ma Jwxo-shiil, baad Jabhad u tahay.
Waxaan hubaa in dadka wada boggaga Ogaden.com, dufaan.com iyo hanqadh.com ay yihiin dadka halganka u soo dhex galay qabiil ahaan [qabiil ku jabhad], laakiin ayna lahayn ujeedo halgan, waxaana ugu dambayn qoraal ay sameeyaan maalinka Jwxo-shiil uu joojiyo sheegashada garabka baas ee uu sheegto.
Waxaan aad ula yaabaa boggaga Ogadennet.com, Qorahey.com iyo canaasiir kale in ay is lee yihiin taageera halganka laakiin way ka dhacsan yihiin, waxaa ugu wanaagsan oo aad halganka wax ugu qaban kartaan waa idinka oo xaqa raaca si ay bulshadeenu u noqoto mid isku kalsoon, sababtoo ah isku kalsooni iyo khaladka oo la iska qabto ayaa dalka wax loogu qaban karaa. Xin iyo shakhsi u raraansho wanaag keeni mayso waxaa uun ay sii kordhinaysaa kala duruga bulshada dhaxdeeda, runtiina wanaageenu maanta waxaa uu ku jiraa in Jwxo-shiil ay ummadu si wada jir ah isaga qabto si loo bad baadiyo halganka Somalida Ogadeeniya.
Mar labaad ninka aan ku halqabsaday waa Ina Miraad Layli, waxaan ku lee yahay waxaa jiray qoraal aad ku afxumaysay dad aan kaa mudnayn adiga oo difaacaya Jwxo-shiil, cid maanta kuu haysataana ma jirto, laakiin Ina adeerow ogow halganka Jwxo-shiil ma leh waxaa leh ummada Somalida Ogadeeniya, waxaana wada Jwxo, waxaynuna wax ugu qaban karaa wada jir, Jwxo-shiil jiir kaa jeexsiin maayo, dhibaatada uu dadkeena dhaxalsiiyeyna waa mid muuqata.
Xaqa uu halganku mudan yahay macbuudku ha ku garan siiyo, hadii ay mardabo iyo munaafaqnimo kugu jirtana Eebaha Weyn u noqo.